နဂါးဖြူ ဗီယက်နမ်မှန်ချပ်တံတား အရှည်ဆုံး စံချိန်ဝင် | Myanmar Builders Guide - Best Building and Construction guide in myanmar
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး သဲကန္တာရဖြတ် အဝေးပြေးလမ်းသစ် ဖွင့်လှစ်
မလေးရှားနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေး ကန်ထရိုက်တာ ၅ သောင်း နီးပါးလုပ်ငန်း ပိတ်သိမ်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်စုံ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အခွန်စည်းကြပ်ရန် တစ်စတုရ...
Home Categories Projects
Developer Updates Project Showcase Tender
Events Global Local What's new Region
Laws and Regulations Architecture Interior Decoration How To Tips
Job Boards Advertise With Us About Us Our Guides
နဂါးဖြူ ဗီယက်နမ်မှန်ချပ်တံတား အရှည်ဆုံး စံချိန်ဝင်
ဗီယက်နမ်တွင် မှန်ချပ်များ ခင်းထားသော မိုးပျံလျှောက်လမ်းကို ၂၀၂၂ ဧပြီလတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ယခုအခါ Guinness World Records က ကမ္ဘာ့အရှည်လျားဆုံး မှန်ချပ်တံတားဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည်။
ယခင်စံချိန်ရှင်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်တုံပြည်နယ်မှ မှန်ချပ်တံတားဖြစ်ပြီး အလျား ပေ ၁၇၂၆ ရှည်လျားသည်။
ဗီယက်နမ်မှန်ချပ်တံတားသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း စန်လာပြည်နယ် ကုန်းမြင့် ကျေးလက်ဒေသတွင် တည်ရှိသည်။ နဂါးဖြူ "Bach Long" ဟု အမည်ပေးထားသည်။
Bach Long မှန်ချပ်တံတားက လာရောက်သည့် ဧည့်သည်များကို သဘာဝတောင်ကုန်းများနှင့် စိမ်းလန်းစိုပြေနေသော တောအုပ်များ၏ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော မြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းများကို
မြေပြင်အထက် အကြမ်းအားဖြင့် ၄၉၂ ပေ တွင် တွဲလောင်းချိတ်ထားသော Bach Long မှန်ချပ်တံတားသည် အလျား ၂,၀၇၃ ရှည်လျားသည်။
ဗီယက်နမ် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အာဏာပိုင်များနှင့် ပြင်သစ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတို့ ပူးပေါင်းပြီး အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဘေးဆိုးကြောင့် မှေးမှိန်နေသော ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြန်လည်အသက်ဝင်လာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ပြည်တွင်းခရီးသည်များသာမက ပြည်ပခရီးသွားများအတွက်ပါ လည်ပတ်စရာ တစ်နေရာ ဖန်တီးပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
တံတားခံနိုင်ရည်မှာ လူ ၄၅၀ ဦး တစ်ချိန်တည်းမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ SUV ကားတစ်စီး စမ်းသပ်မောင်းနှင်ကြည့်ခဲ့ရာ အဆင်ပြေသည်။ စမ်းသပ်ခြင်းသက်သက် ဖြစ်ပြီး ကားများ ဖြတ်သန်းခွင့် မပေးပါ။
Bach Long သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် တတိယမြောက်မှန်ချပ်တံတားဖြစ်သည်။
Global Read 102 times
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်စုံ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အခွန်စည်းကြပ်ရန် တစ်စတုရန်းပေ သတ်မှတ်တန်ဖိ
အင်ဒိုနီးရှား မြို့တော်သစ် နူဆန်တာရာအတွက် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖိတ်ခေါ်
MMRD was founded in 1992 by U Moe Kyaw and quickly established itself asaleading market research company and publisher of the first trade directory in Myanmar – the Builders Guide.
Copyright © 2021 Builders Guide, Myanmar's Leading Yellow Pages Business Directory. All Right Reserved.